प्रभु साहसँग किन चिढिए प्रधानमन्त्री ओली ? : RajdhaniDaily.com
Homeप्रदेशप्रभु साहसँग किन चिढिए प्रधानमन्त्री ओली ?
काठमाडौँ । विगत लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिदै आएका माओवादी नेता प्रभु साह र प्रधानमन्त्री बिचको सम्बन्ध अहिले चिसिएको छ । हिजोसम्म प्रधानमन्त्रीको अति प्रिय रहेका प्रभु साह आज किन एकाएक अप्रिय भए ? आखिर के भयो त्यस्तो कि मधेशका एक सशक्त नेताको रुपमा चिनिएका प्रभु साह र प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्धमा दरार आयो ?
“जहाँसम्म जबजको कुरा हो यो त प्रचण्डले समेत मानिसकेको र हिजो उहाँको फेस-सेभिङको लागि मात्र हामीले जनताको जनवाद भनेका थियौं। त्यसैले यस्तो विषयमा अविश्वास नगर्न माओवादी पक्षलाई बुझाउने कोशिश नगरेको पनि हैन; यति गर्दा पनि न भए हामी के गर्न सक्छौ ?” एमालेका एक नेताले भने ।